Nkọ akụkọ banyere ndị na - adịghị ọcha, nwa agbọghọ na nwa ele - Afrikhepri Fondation
Tọzdee, Septemba 16, 2021
Akụkọ banyere unicorn, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke na elephant
Na-agụ: 4 mins
Dafọ gara aga, n’oge e kere ekebe Igbe ahụ, Chineke gaara agwa Noa ka ọ zọpụta anụmanụ nke Iju Mmiri ahụ site n’ime ka ha banye abụọ abụọ iji hụ na ụdị ọ bụla dị ndụ n’ụwa. Unicorn pụtara n’ihu Noa naanị ya… Noa jụrụ ịnara ya na-egosi na ya enweghịzi ụlọ n’ime ụgbọ ahụ. Mana n'otu oge ahụ, enyí di na nwunye banyere Igbe ahụ: unicorn, oke iwe, ghọtara na Noa agwaghị ya Eziokwu ma site na ụbọchị ahụ nwere oke ịkpọasị megide enyí.
Ọ kpọrọ ha asị nke ukwuu nke na mgbe ọ hụrụ onye na-eri ha n'udo, ọ wakporo ya n'ike n'ike na n'atụghị egwu. Ọ bụ ezie na enyí ama ama maka ike ya ma na-agbago elu na-agba mbọ iji chebe onwe ya pụọ ​​na mbuso agha nke unicorn, nke a nwere ikiti ụkwụ siri ike ma sie ike nke na ọ kụrụ ya n'akụkụ ma maa ya ụra na-enweghị ya. ọ nwere ike ichebe onwe ya.
Otu ụbọchị, na nsọtụ otu obodo, The Unicorn wakporo enyí. Ọ kụrụ ya n'okpuru afọ nke ukwuu na nkọ ya dị nkọ nke na ọ gbanyere ya kpamkpam. Ka oge na-aga, ndị obodo ahụ ahụghị enyí ha. Ha biliri ịchọta ya. Ha hụrụ ya ndụ ma merụọ oke ahụ, mesoo ya, wee kpebie igbu unicorn ka ọ ghara ịmeghachi ụdị omume ahụ.
Nanị ụzọ ị ga-esi duhie na nche nke unicorn bụ ịkpọbata nwa agbọghọ na-amaghị nwoke n'ihi na ọ bụ naanị ya nwere ike ime ka obi jụrụ mmụọ a na-eme ihe ike ma na-alụ ọgụ, nke na-abanye akwụ ya n'isi n'obi ya wee rahụ ụra ... , mgbe unicorn rutere wee hụ nwa agbọghọ ahụ, ọ bịakwutere ya ozugbo wee dinara ala na ikpere ya; mgbe ahụ ndị na-achụ nta gbara ya gburugburu ma chere ka ọ gaa ngwa ngwa gbuo ya. Ka ha hụrụ n’etiti ahịhịa ahụ, ha nọ na-eme nledo na ya, na-eche ihe mgbaàmà ga-egosi onyeisi ha, ma ọ ka na-ala azụ. N'ihi na ọ bụrụ na ha merụrụ ahụ ma ọ bụ gbuo unicorn, obodo ahụ dum ga-abụ ihe anathema na ọbụbụ ọnụ ga-adakwasị ya, mana ọ bụrụ na ọ gwọghị Elephant ha dị nsọ ugbu a, site n'ịchịkọta ọbara nke unicorn nke nwere ike ịgwọ ọrịa. pụrụ iche, onye a ga-anwụ n'ezie.
Ka ọ nọ na-akọ akụkọ ya, otu onye agha nwere obi ike gbara akụ́ nke mara unicorn ahụ ma hichaa uwe ọcha ya na-acha uhie uhie. Ekpuchi ya n'ọbara nke unicorn, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke gbapụrụ site na meanders nke oké ọhịa. Unicorn jupụtara n'ike na ọsọ ọsọ na otu ndị dike gbalịrị ịgbalaga mana were iwe na iwe were ha wee gbuo ọnụ ọgụgụ buru ibu. Onye isi ugbu a, na-achịkwa zoo n'ọgba a. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, nwa agbọghọ ahụ na-amaghị nwoke laghachiri n'obodo nta ma tinye uwe ya na ọnya ahụ elephant nke ọnya ya malitere ịgwọ. Ka ọ dị ugbu a, onye ndu ahụ ka nọ n’ebe zoro ezo, na-eche ka unicorn pụọ, ebe unicorn ahụ, nke eburu uhere nke obi ya, na-agagharị gburugburu ebe obibi ahụ n’enweghị ike ịbanye na ya.
N'ịbụ onye jupụtara na obi nkoropụ, ịkpọasị, iwe na ịbọ ọbọ, unicorn kpebiri ịkọwa chimera, ọdụm nke ọdụm nwere anụ ewu na ọdụ dragọn, site n'ime ka o kwenye na ọ ga-enweta ụwa mana unicorn maara na o juputara chimera na utopias na-agaghị ekwe omume. Na-ata ahụhụ, merụọ ahụ, unicorn ahụ ahapụla ọrụ mbụ ya site na ịghara igosipụta ikpe ziri ezi; Chineke we ba ya nba site na ichupu ya rue mgbe ebighi ebi n'elu uwa.
Nke a bụ otu esi egbochi Ọgba aghara n'ụwa, Chineke zipụrụ Pegasus, ịnyịnya Ya. Mgbe Pegasus na-a drinkingụ mmanya n'ọhịa, onyeisi obodo ahụ hụrụ ya, jiri nwayọ nwayọ wee bịaruo ya nso. Nwayọ nwayọ, mana n'ezie ọ bịaruru nso Pegasus, maa uwe ọcha ya mara mma, jide ya ma tinye ya wee gawa obodo
Mgbe ha rutere ebe ahụ, ha hụrụ na oke iwe jidere, chimera bibiri ihe niile dị n'ụzọ ya, gbaa obodo ahụ ọkụ wee gbuo ihe ndị na -adịghị mma. Ọ ka ghọtara na ọ bụ otu unicorn duhiere ya. Ọ bụ ezie na ndị dike obodo ahụ gbakọrọ aka megide ihe otiti nke a nke dakwasịrị ha dị ka mma agha Damocles, obi ike ha enweghị ike ịnwe anụ ọhịa ahụ. Ebe obibi na ubi abụghị naanị ntụ ... Ọkụ erepịala ihe niile. Ya mere onye ndu ahụ ji chimara mara chimera aka, were ọtụtụ akụ kụọ ya ...
N'ịbụ ndị akụ juru, ike gwụsịrị, nnukwu anụ nwere ọdụ ọdụ abụọ dara na ocher nke mịrị n'ọbara ya na nke onye aka ya dị ọcha. Mgbe ahụ, ọ rịgoro n'ugwu ya wee bepụ isi atọ nke chimera ...
Kemgbe afọ iteghete, ị mala ihe mgbu nke ịmụ nwa mana taa, a mụrụ gị site na ntụ gị dịka Phoenix maka na ọ bụ site na Fire ka m mezigharịrị gị ọfụma.
Mu onwem g thatme kwa na ub sevenò asa ub youò asa ka unu ghara ima oké unwu ma-ọbu agha; Mba gị ga-aba ọgaranya ma dị ebube n’ihi na a ga-agọzi ndị gị.
Site n'ebe ugwu ruo na ndịda, site n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda anyanwụ, akụkọ ihe mere eme gị ga -anọgide na ncheta mkpokọta dị ka isi mmalite nke nnwere onwe, nnwere onwe na udo ".
Ihe ndị ọzọ dị na ngalaba
Nwa m nwa - nwa Jesus (Poem)
A njem njem
Buru ibu isiokwu
Lelee Basquiat (1996)
Ezigbo ọrụ nne na-eme n'Africa
Ihe mgbaru ọsọ - Brian Tracy (Audio)
Na njedebe nke ọnwa 1960, Lumumba jidere ya. Ọ na-edegara nwunye ya Pauline leta ikpeazụ
Nwebiisinka © 2021 Afrikhepri
Ọ bụrụ na saịtị ahụ masịrị gị, biko kesaa ya na ndị enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ gị!